လက်နက်ချအခမ်းအနား (ကိုဆွေ) | လမ်းအိုလေး
March 5, 2010 by lanolay	2 Comments
(မဟေသီ – ဇွန်၊ ၂၀၀၈)
Categories: Kabyarz | Tags: ကိုဆွေ, Kabyarz, Ko Swe, lanolay, modernist poetry | Permalink.
2 thoughts on “လက်နက်ချအခမ်းအနား (ကိုဆွေ)”
သဘောပေါက်တဲ့အခါ ရီဝေမှုတွေနဲ့ မျှော်နေမှာပေါ့ (မြေမှုန်လွင်)ကဗျာက ကော့မန့်ရေးလို့မရတော့လို့…
ကျွန်တော်တို့အားလုံး လွတ်လပ်စွာ ကွဲပြားခြားနားခွင့်ရှိတယ်ဗျာ..အပြာဖြစ်ဖြစ်..အဖြူဖြစ်ဖြစ်..အနက်ဖြစ်ဖြစ်..ခံစားမှုကို ဖော်ကျူးတာပဲ…အဲလိုသာပြောကြေးဆို nudity ပန်းချီတွေ အကုန်လွှင့်ပစ်ကြ…ဗီးနပ်စ် ရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံပန်းပု မြင်ရင် မျက်စိပိတ်ထားကြ..
လူသားကတော့ လူသားဆန်စွာ တွေး…ရေး…ဖွဲ့….ဆို…နေမှာပဲ…တစ်ယောက်က လက်ဖမိုးမြင်ရင်…နောက်တစ်ယောက်က လက်ဖဝါးမြင်မယ်…မြင်တဲ့လူအပေါ်မှာမူတည်တယ်…
bro walk on!!